Isku Socodka iyo Ganacsiga Caasimada Dalka Shiinaha oo Dib u Furmay | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Isku Socodka iyo Ganacsiga Caasimada Dalka Shiinaha oo Dib u Furmay
Isku Socodka iyo Ganacsiga Caasimada Dalka Shiinaha oo Dib u Furmay
Sida ay daabacday wakaaladda wararka Shiinaha ee Xinhua maamulka maxalliga ah ee caasimada Shiinaha Beijing, waxay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in 99.9% dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isu socodka dadweynaha ee caasimada uu ku soo laabtay si caadi ah isla markaana ay dib u shaqo bilaabeen warshadaha waaweyn ee caasimadda.
Li Soo Fang, oo ah ku xigeenka agaasimaha guddiga horumarinta iyo dib u habeynta magaalada oo la hadlay wakaaladda Shiinaha Xinhua waxa uu sheegay in shirkadaha ugu waaweyn ee ku yaalla caasimadda Shiinaha ee Beijing ay shaqadii dib u bilaabeen isla markaana ay shaqadooda soo xaadireen dhamaan shaaalaha ka shaqeeya warshada iyo shirkadaha.
Arrintan ayaa imaaneysa kadib labo bilood iyo bar oo inta badan dalka Shiinaha uu la hakiyay isu socodkiisii taasoo keentay inuu hoos u dhaco ganacsiga iyo dhaqaalaha dalkaas, taasoo ka dhalatay kadib markii bilooyin kahor uu waddankaasi ku faafay viruska Corona kaasoo laayay kumanaan qof oo shiinays ah.
Sidoo kale Mr Li wuxuu sheegay in dhismayaasha ganacsiga iyo hoteelada eek u yaalla caasimadda Beijing ay dib u bilaabeen shaqadooda maalin laha ah isla markaana ay Dawladdu ay culayskii dadweynaha saarnaa ka qaaday.
Turjumaadii:- Zakariye Khaliif Faarax